Ny antony 5 BEST dia ny hanokatra kaonty Offshore
Ny antony 5 tsara indrindra hanokafana kaonty Banky Offshore
Ny antony ambony indrindra 5 momba ny kaonty any ivelany dia ireto manaraka ireto:
Manomeza fiarovana amin'ny fiantohana
Manome varotra isan-karazany
Banky matanjaka (jereo eto ambany ho porofo)
Izany rehetra izany no fototry ny portfolio ara-bola mahasalama. Tsy misy zava-baovao momba izany vaovao izany. Nefa, atombohy mampifangaro ny singa fototra amin'ny volanao manokana miaraka amin'ny toetr'andro faly. Avy eo mijery ny toetry ny tany ankehitriny. Amin'izany hazavana izany, ny antony lehibe 5 offshore bank ny malaza dia hanadino kokoa.
"Raha misy teny iray tiako havelako androany, dia ity ... Glocal." -Natalie Keener avy amin'ny sarimihetsika Eny ambony eny
Top antony 5 ho an'ny Banky Offshore
1. Manome fiarovana amin'ny famatsiana
Ny US dia tsy misy afa-tsy 4.4% amin'ny mponina eran'izao tontolo izao. Mahagaga anefa fa manana 80% an'ny mpisolovava manerantany ary 96% amin'ny fanarahan-dalàna rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tahaka ny Amerikanina an-tapitrisany, ianao iharan'ny risika isan-andro. Ohatra, voatarika isaky ny miditra ao anaty fiaranao sy mitondra fiara ianao. Isaky ny mandray mpanjifanao vaovao ianao dia mety hisarika ny tenanao amin'ny valan'ireo mpisolovava. Isaky ny misy olona miampita ny fanananao, miaraka amin'ny fahazoan-danao na tsia, dia mety hiteraka ady ara-dalàna ratsy izany.
Aza hadino fa ny olombelona dia izay nanoratra ny lalàna. Tsy rariny sy hery fotsiny eny an-danitra izany. Ampahatsiahivo ny tenanao koa ny fibodoana an'ireo izay manoratra lalàna. Mpanao politika. Mpisolovava ny ankamaroany. Ary rehefa manoratra ireo lalàna ireo, heverinao ve fa manoratra azy ireo ho an'ny tombotsoan'ny asany manokana izy ireo? Ka izay tokony hoheverintsika dia izao. Na inona na inona manakana ny lalàna manohana ny mpisolovava mahazo ny tanany ao am-paosinao, menatra fotsiny ny fikomiana ampahibemaso, dia ny fomba nanoratan'ny mpanao lalàna ny lalàna. Ny mpanao lalàna dia tsy nanoratra ireo lalàna ireo amin'ny hoe "rariny". Ny ankamaroan'ny lalàna dia nosoratan'ny voalohany, ary ho tombontsoan'ny, mpikambana ao amin'ny sehatry ny lalàna.
Nanana client manankarena teo aloha isika izay voakotry ny fanarahan-dalàna tanteraka. Izy mpikambana ao amin'ny biraon'ny talen'ny birao. Ny iray amin'ireo mpiasany, ao amin'ny orinasany lehibe, dia nanoro ny banky amin'ny mpanjifa azy. Ny mpiasan'ny mpanjifanay dia tsy voalaza fa ny mpanjifa dia talen'ny banky ihany koa. Rehefa tsy nahomby ny banky tamin'ny trano fivarotana trano, ny mpanjifany dia nanenjika ny mpanjifantsika noho ny fisolokiana.
Nenjehin'izy ireo izy noho ny tsy fahombiazan'ny mpiasa tsy nampahafantariny azy ny toerana misy ny mpanjifantsika amin'ny banky. Ny fitsipiky ny fiantohana dia nandà ny hiaro azy satria ny fitoriana dia misy ny teny hoe "mpamitaka." Tsy nahaloa azy ny banky amin'ny toerana misy azy. Na izany aza, ny Fitsarana Tampony any Kalifornia dia nanamafy fotsiny ny fitsarana $ 2 + tapitrisa hanohitra ny mpanjifanay. Soa ihany ho azy, nametraka drafi-piarovana fananana izahay.
Taorian'ny dimy taona niadiana, dia nisafidy ny fatiantoka izy. Vao avy nirehareha tamin'ny zanabavy izy, ary nanohana ny vadiny, ny zanany lahy sy ny reny narary. Tsy vitan'ny mpisolovava mpiasan'ny banky mpiasan'ny fatiantoka fotsiny ny zavatra rehetra tsy mifatotra. Izy koa dia nanenjika ny vadiny, ny zanany ary ny reniny. Nanenjika azy ireo izy noho ny fanampiana azony avy taminy nandritra ny efa-taona nialoha azy.
Eny, ny mpiasan'ny banky no nanenjika ny zanany vavy tamin'ny vola naloan'ny rainy ho an'ny oniversite, trano, sakafo, sns. Tezitra be izy. Tena ligne. Ara-drariny ve ny ahafahan'izy ireo manenjika ny zanany vavy amin'ny vola naloan'ny ray aman-dreniny? Ny fanontaniana mety angamba dia ny hoe, "Inona no olana mety hahazoan'ny mpisolovava ao am-paosin'ny olona?" Ny fametrahana izany fanontaniana izany matetika no ilazanao ny fomba nanoratana ny lalàna. Raha ny tokony ho izy dia nahazo ny ampahatelon'ny zavatra voaroba ny mpisolovava miasa amin'ny maha-mpitati-bolan'ny banky azy.
Aza matoky ny fiantohana
Ireo fehin-tsoratra natao tamin'ny politika ankehitriny dia mifandraika amin'ny pirinty vita amin'ny tranokala sy fanodinana. Hitan'ny fiverenany matetika izany rehefa miantso amin'ny talenta mampalahelo ny mpanjifa. Matetika ny mpisolovava dia manangona intelo miampy fahavoazana miampy ireo saram-mpisava lalana. Azon'izy ireo atao raha afaka mandresy lahatra ny mpitsara Robin Hood izy ireo fa misy ny hosoka. Vokatr'izany dia matetika no manipy andalana na roa momba ny fisolokiana amin'ny fitoriana, ara-dalàna na tsia.
Ka na inona na inona no asanao, misy antoka azo antoka ity. Mieritrereta amin'ny tsy fahatokisan-tena momba ny hoe iza no hiady hevitra aminao amin'ny manaraka. Sokafy ny kaonty any ivelany. Tazano ny kaonty amin'ny fiarovana ny fananana na orinasa. Ity fitambarana ity dia afaka manome anao fomba hitazomana ny volanao. Afaka matory tsara ianao amin'ny alina, satria fantatrao fa tsy hisy fiantraikany aminao ny korontana ara-dalàna.
2. Divers diversification
Ahoana raha misy manenjika anao ary manafaka ny kaontin'ny banky amerikanina avy hatrany ianao? Vola inona azonao ampiasaina hiarovan-tena? Ahoana no andoavanao ny volanao? Izahay manana mpiara-miasa amin'ny orinasa izay mpiantoka. Avy any anaty manga, nisy masoivoho iraisan'ny fanjakana iray tonga hisambotra azy sy ny mpiasa sasany. Taorian'izay dia norobainy ireo kaonty bankiny rehetra; rehetra ho fanitsakitsahana ny fiantohana ataon'ny mpiasa tsy ampy taona. Raha ny marina, dia tsy nahalala fa nanao ratsy izy ireo.
Nahatratra dolara an-tapitrisany isan-taona izy. Na izany aza dia tsy nanamboatra ny fahazoana mivoaka ny vola hialany izy. Nandeha izy raha tsy nilaza fa tsy manana ny vola hividianana mpisolovava hiaro azy akory izy. Ny mpitsara amerikana dia tsy manam-pahefana hametrahany ny clamp eo noho eo amin'ny vola any amin'ny firenen-kafa. Izay indrindra indrindra no tsy misy raha toa ka tsy manana sampana amerikana mifanaraka ny banky; fa mihoatra izany raha toa ny fitokisan-tena mendrika.
Ny fanananao vola any amoron-dranomasina dia manome hery anao hanakanana olona tsy handroaka anao amin'ny alàlan'ny fampitam-bokatra. Izy io dia afaka misoroka ny fahavalo ara-dalàna na ny manam-pahefana iray be loatra amin'ny fiampangana lainga anao. Raha tsy nisy io fiarovana io dia afaka nidina tampoka teo am-pelatananao izy ireo, nanery anao hilatsaka amin'ny famindram-pony. Mametraka anao ho voafehy izy io ary manampy anao hitazona ny seza fanaon'ny mpamily ny volanao tena mafy.
Safidy fanampiny fampiasam-bola fanampiny
Amin'ny lafiny iray hafa dia mety efa mialoha ny làlanao ara-bola ianao. Azo inoana fa raha mitady safidy fampiasam-bola sy fomba tsara kokoa hitantanana ny volanao ianao. Ary, mihoatra noho ny azo inoana, matetika ianao dia fantsom-baovao matetika: CNN, MSNBC, Fox, Bloomberg na YouTube. Azonao atao ny mijery azy ireo mba hanaraka hatrany ny fironana ara-toekarena sy ny toe-piainan'ny tsenam-bola.
Mpilalao ara-bola lehibe toa an'i Warren Buffett, George Soros, ary Dr. Michael Burry (Mpanorina ny Scion Capital, LLC) dia vitsivitsy amin'ireo tsy mahay afa-tsy ny tsy fahombiazan'ny trano fonenana 2008 Etazonia. Naneho fampitandremana momba ny Fahavoazana Lehibe sy ny fianjeran'ny dolara amerikana izy ireo. Nilaza izy ireo amin'izao fotoana izao fa mirongatra, saingy tsy fantatr'izy ireo hoe rahoviana.
Mety efa hainao fa efa nandoa vola tamin'ny Banky Amerikana i Buffett sy Soros nandritra ny taona maro. Ny banky momba ny fampiasam-bola dia tsy nianatra firy momba ny fitiavan-karena sy ny hosoka nataony tamin'ny vahoaka amerikana. Ambonin'izany, hanantena fangatahana ara-bola hafa izy ireo. Amin'ity indray mitoraka ity dia mety hisy tsy ho fampindram-bola ataon'ny governemanta amerikana satria mety tsy ampy vola ny fanjakana amerikana.
Amerika no firenena manana ny trosa indrindra eto an-tany. Ny tarehimarika trosa no avo indrindra amin'ny firenena rehetra ao amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Raha ny marina dia misy tranokala ahafahanao manara-maso ny US Debt amin'ny fotoana tena izy. Manambara ny manam-pahaizana fa ny habetsaky ny vola tsy azo averina ao anatin'ny 40 taona. Ny ankamaroantsika dia tsy maintsy miatrika zava-misy marina izay tsy misy fifanarahana varotra ISDA mba afaka miafina amin'ny tsiambaratelon'i Môrmôna isika ankizilahy lehibe. Ka ny zavatra tsara indrindra azon'ny sisa ataontsika dia ny miaro ny volany ao anaty kaonty any ivelany.
3. Systems Banking Sounder
On Global FinanceNy tatitra vao haingana indrindra, dia nantsoina hoe, "The World's 50 Safest Banks," tsy misy banky manana anarana amerikana mihitsy aza no nanao ilay lisitra — tsy iray akory. Any amin'ny banky 50 dia i Etazonia irery no ao anaty lisitra. Ny banky kely miorina amin'ny alàlan'ny laharana telo amin'ny #30, #45 ary #50 no hany banky amerikanina nanao azy. Misy fehezan-teny ampiasain'ny sasany any amin'ireo banky amerikana lehibe hilazana ny faharavan'ny loza izay vinavinaina hitranga: lehibe loatra ny tsy mahomby. Tsy mety avy amin'ny fahamarinana izany.
Vantany vao manomboka ny banky insolvent (tsy afaka mandoa trosa) noho ny trosa avo lozabe ary tsy manana toerana hiverenana amin'izao fotoana izao amin'ny famatsiam-bola ho an'ny governemanta, dia ho very ny vola ao amin'ny fampiasam-bolanao. Intsony.
Ireo banky dia hampiasa ny tahirinao mba handoavana ny trosany. Tahaka izay nitranga vao haingana tany Gresy, dia hikatona ireo banky. Aorian'izay dia tsy afaka haka vola amin'ny ATM ianao satria tsy hisy vola intsony. Mety hisy diso holazaina hoe: "Eny fa ahoana kosa raha ataoko ny volako mihoatra noho izany ary mitranga izany?"
Amin'izay no hidirantsika. Izahay dia mikaroka ny banky matanjaka sy azo antoka indrindra eran'izao tontolo izao ary manao ny ankamaroan'ny soso-kevitra mifototra amin'ny antontan-kevitr'izy ireo ara-toekarena. Tsy mitsambikina fotsiny ny banky avy amin'ny lisitra "milamina indrindra eto an-tany" ka tsy milamina ao amin'ny nanosecond. Ahoana kosa raha misy olona mahazo vola amin'ny banky tsy ao amin'ny lisitra "azo antoka indrindra"? Dia ahoana raha ny banky dia any amin'ny firenena be trosa indrindra eto amin'izao tontolo izao? Ankehitriny, izany dia antony mahatonga ny tena ahiahy.
Raharaha loza: Mialà eny am-pianarana
Mpilalao ara-bola sy toekarena lehibe maro no mampitandrina ny fianjeran'ny dolara. Io fianjerana io dia noho ny haben'ny trosa lehibe indrindra, ny fiakaran'ny vidin'ny solika amin'ny toekarentsika ary ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Araka ny Thomas Metcalf, mpahay toekarena, mpikaroka ary mpamorona ho an'ny tranonkala ara-bola ao amin'ny aterineto, Zacks, "Ny tahan'ny tariby ho an'ny inflation dia ny 2 percent. Rehefa nianjera teo ambany latsak'izy ireo ny vidim-piainana ary tsy naneho marika ny fisafidianana, dia naneho fiahiana lehibe ny Federal Reserve sy ny mpahay toekarena maro. Miakatra ny vidin-tsolika, tsy afaka manampy ianao fa manontany izay hitranga raha latsaka ambany ny zero. Izany no fiahian'ny mpahay toekarena. "
Apetraho amin'ny toeram-pialofana azo antoka ny volanao, izay tsy any amin'ny banky lehibe amerikana, fa tsy mpanao banky any Etazonia, matetika mifatotra akaiky amin'ny banky amerikana. Hanova ny ampahany amin'ny fampiasanao amin'ny vola azo antoka sy ara-dalàna, offshore account any amin'ny iray amin'ireo banky azo antoka indrindra eto ambonin'ny tany.
4. Nihena ny fahalemena
Aza mametaka ny atody rehetra ao anaty harona iray. Raha manao izany ianao, dia mampitombo ny fotoana mety ho very ny volanao sy ny fampiasanao vola. Noho izany, raha ao amin'ny toeram-piasana iray mety hotsidihina ianao amin'ny fotoana rehetra, dia tsara ny mamindra ny fananana sasany any amin'ny toerana azo antoka tsy hifandraisan'izy ireo aminao. Raha manambady ianao, raha tsy manam-bady ary manan-janaka, na mpierina an-tsaina fotsiny, dia ny fomba fametrahana vola any am-pianarana dia fomba mahomby kokoa hanamaivana ny fahalemena ara-bola.
Tena tia sy mikarakara ireo fianakaviantsika tokoa izahay. Tsy midika anefa izany fa mila mampiasa ny lovan-tsarantsika isika mba handoavana ny trosany rehetra rehefa mandalo izany izy ireo. Ny fianakaviana tafavoaka velona dia tompon'antoka amin'ny fandoavana ny trosan'ny havan-tiana nodimandry miaraka amin'ny fananan'ny maty. Ny famatsiam-bola amin'ny ankohonany amin'ny kaonty any ivelany, izay notokisan'ny fahatokisan-tena tany ivelany, dia afaka miaro ny fizokianao tsy ho lany ringana taorian'ny fahafatesan'ny havan-tiana iray.
Aza midina anaty sambo mihetsiketsika.
Doug Casey, mpanoratra ara-bola ary mpahay toekarena maimaim-poana no nanao ny fifandonana teo amin'i (ny fahalavoan'ny) Etazonia sy ny fahalavoan'ny Fanjakana Romanina. Hoy i Casey: "Tsy azontsika esorina ny lalàna faharoa momba ny thermodynamika, izay milaza fa ny entropy dia mandresy ny zava-drehetra ary izany dia amin'ny fotoana rehetra dia miharatsy sy milentika ny rafitra rehetra. Ary ny fahombiazan'ny rafitra iray dia ny hery bebe kokoa hikolokolo izany. Ny fahasamihafana sy ny fifandraisana ary ny fifampiraharahana dia mihamahantra izany, ny manjavozavo kokoa dia ny fanimbana sy ny tsy fahombiazan'ny loza. Anisan'izany ny firenena sy ny kolikoly. "
Na, azontsika atao ny manonona ny vondrona mozika fanta-daza, ny Blood, Sweat and Tears, "Ny zava-miseho dia tsy maintsy midina."
Misy horonantsary 2009 nilalao sarimihetsika George Clooney, mitondra ny lohateny Eny ambony eny. Ao anatin'izany, ny tanora iray feno finiavana, go-getter, Natalie Keener, nilalao an'i Anna Kendrick dia manonona ny teny hoe "glocal." Ny zokiolona Anna, anisan'izany Andriamatoa Clooney, dia very hevitra amin'ity fehezanteny ity. Nanazava i Anna avy eo fa ny "glocal" dia terminolohiya vaovao ampiasaina hamaritana ny fampivondronana ny tsena manerantany sy eo an-toerana.
Asehon'i Glocal fa kely kokoa noho izao ny tontolon'ny teknolojia, ny varotra maimaim-poana ary ny tsenan'ny orinasa. Na mitsambikina ao anaty sarety ary manitatra ny faribolanao, na miala aina. Ny fananana fijery manjavozavo amin'izao andro sy taona izao dia tsy mitongilana intsony - ilaina izany. Banky Offshore dia manome fomba tena manan-danja sy mandaitra hampitomboana ny sehatra fampiasam-bola.
Betsaka ny fitaka, fisolokiana, fanodikodinana ary fanaovana halatra nataon'ny sampan-draharahan'ny banky amerikana. Toy izany koa ny mpilalao amin'ny tsenam-bola sy ny Federal Reserve. Miatrika fitambaran'ny olana ara-bola voalaza etsy ambony na 'manerantany isika ». Izany dia mahatonga azy io ho rivo-doza tonga lafatra amin'ny fianjerana ara-bola hafa.
Antsoy ny nomer na valin'ny famotopotorana eto amin'ity pejy ity ho fanampiana sy fanampiana. Ataovy ny fikarohana nataonao. Saintsaino ny tenanao ary mieritreritra any ivelan'ny boaty — ary — mieritreritra any ivelan'ny firenena. Aza tonga olon'ny rafitry ny banky amerikana. Manova sy mihazona ny volanao amin'ny kaonty any ivelany.
<Ho an'ny toko 1
Ho an'ny toko 3>